Afrika, 16 October 2019
Arbaco 16 October 2019
Haweenka iyo Qoyska: Faa'iidada Kala Dheereynta Ilmaha
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegeysa in 214 milyan oo haween ah oo ku jira da'da taranka oo ku nool waddamada soo koraya ee raba inay ka fogaadaan ama kala dheereeyaan uurka ayaan adeegsadaan qaab ka hortag oo casri ah.
16 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Cafar ee Ethiopia
Rag hubeysan ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay, islamarkaana qiyaatsii tobaneeyo kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia, sida ay booliska sheegeen Isniintii.
Aqoonyahanka diinta ku adag ee Qays Saciid, oo siyaasadda ku cusub, ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee Tunisia, isaga oo ka adkaaday maal-qabeenka warbaahinta, Nabiil Quray, sida ay muujineyso natiijo horudhac ah.
Abiy oo ku guuleystay abaal-marinta Nobel Peace Prize
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa maanta ku guuleystay abaal-marinta nabadda ee Nobel Peace Prize, sida uu shaaca ka qaaday guddiga Nobel ee fadhigiisu yahay dalka Norway.
Soomaaliya oo u yeedhay safiirka Kenya
Dawladda Soomaaliya ayaa u yeedhay safiirka Kenya u jooga waddanka Lucas Tumbo. Safiirka Kenya ayaa waxaa looga yeedhay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya.
Kenya oo wajahaysa xasarad daroogada Heroin-ta ah
Kenya waxaa haysta dhibaato: Waxa ay la halgamaysaa tirada dadka isticmaala daroogada heroin-ta oo sii kordhaya.
Gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa markii ugu horreysay laga dhisey ciidamada Kumaandooska ee sida gaarka ah u tababaran.
Xildhibaano Somali Kenyan ah oo baaritaan lagu hayo
Guddiga anshaxa, la-dagaalanka iyo ka hortaga musuq-maasuqa Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan oo haystaa baasaboorada dalalka kale ay xilalkooda wayn doonaan.
Maxkamadda ICJ oo u yeedhay Soomaaliya iyo Kenya
Wararka naga soo gaadhaya maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ICJ ayaa sheegaya in loo yeedhay wakiillo ka socda labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo la xiriirta dacwadda badda ee labada dawladood u dhaxaysa.
Dibad-baxyo ka dhan ah al-Sisi oo ka dhacay Masar
Banaanbaxyo waa weyn ayaa maanta mar kale ka dhacay dalka Masar, ayada oo dad carreysan ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada Qaahira iyo qaar ka mid ah magaalooyin kale ee dalka.
Qaxootigii ugu horreeyey ee laga qaaday Libya oo gaaray Kigali
Koox ka kooban 66 qof oo qaxooti African ah oo laga soo qaaday dalka Libya ayaa soo gaaray magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda, sida ay sheegtay QM.
Wareysi: Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle